राहतमा ६० अर्ब : कसलाई, कसरी ? बजेटले धरातले हेरेको छ : पूर्वअर्थसचिव खनाल
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र बजेटलाई वितरणमुखी बनाउन नहुने कित्तामा उभिँदै आएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेपछि अहिले त्यस्तो सैधान्तिक बहस गर्ने समय नरहेको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । निजी क्षेत्रले अहिले पनि राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम प्रयाप्त नरहेको प्रतिक्रिया दिएको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री खतिवडाले विभिन्न तवरबाट राहतलाई ध्यानमा राखिएको बताएका छन् ।
'बजेट वितरणमुखी गर्नु हुँदैन, उत्पादन केन्द्रितमा ध्यान दिनुपर्छ, अहिले त्यस्तो बहस गर्ने समय छैन' अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार गरिएको भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने 'अहिले जीवनरक्षाकf लागि ल्याइएको बजेट हो, विश्‍वभर नै राहत र पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिएको छ । हामीले पनि राहतको लागि प्राथमिकता दिएका छौँ ।'
खतिवडाले जरिवना छुट, नगदसम्मका कार्यक्रमार्फत् राहत दिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । पूर्वअर्थसचिव रामेश्‍व खनाल पनि अहिलेको धरातललाई मध्यनजर गरेर राहतका कार्यक्रम आएको बताउछन् । 'नीति तथा कार्यक्रम धरातलभन्दा बाहिर गएको देखिएको थियो । तर, बजेटभने त्यस्तो देखिएन । कोरोनाले सिथिल बनाएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानमा ध्यान पुग्ने गरी राहतका कार्यक्रम पनि अघि बढाएको देखियो ।'
अर्थमन्त्री खतिवडाले पनि बजेटमा मुख्य जोड स्वास्थ्य, श्रम र राहतमा दिएको बताएका छन् । बजेट घटाएको सन्दर्भलाई उनले भनेका छन् '२ फड्को फड्किन एक पाइला पछि सारिएको हो ।'
खतिवडाले विभिन्न तवरबाट राहतमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्चिने योजना बनाएको बताएका छन् । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमदेखि नयाँ रोजगारी दिन र सीप सिकाउने कार्यसम्मका लागि राहत दिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
राहत कहाँ कति
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी नपाउने, तर राहत दिनुपर्ने कार्यक्रमको लागि
३ अर्ब रुपैयाँ (स्थानीय तहमार्फत्)
विभिन्न शीर्षकको विद्युत् छुटमा
८ अर्ब रुपैयाँ (१० युनिटको प्रयोगसम्म विद्युत् छुट, १ सय ५० युनिटसम्म २५ र २ सय ५० युनिटसम्मका लागि १५ प्रतिशत छुट)
१ अर्ब २५ करोडको योगदान पुग्ने गरी छुट
संगठित संस्थाको लकडाउन अवधिभर रोजगार दाता र श्रमिक दुवैको सामाजिक सुरक्षा रकम दाखिला
सहुलियत कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत ५ प्रतिशत व्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनको लागि अनुदान रकम
१४ अर्ब रुपैयाँ
उद्योग व्यवसायमा परेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न विभिन्न किसिमका कर छुट दिनको लागि
६ अर्ब रुपैयाँ
लकडाउन अवधिभर सरकारी संस्थानमार्फत खाद्यन्नमा १० प्रतिशत छुट दिन
पुनर्कर्जा बढाइ त्यसको व्याज अनुदानको लागि
२० अर्ब रुपैयाँ
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १६, २०७७, १६:३६:००